कर्मचारी भर्ती केन्द्र बन्दै बिपी धरान, इन्जिनियरलाई हटाइ विभाग प्रमुखको जिम्मा ओभरसियरलाई - inaruwaonline.com
कर्मचारी भर्ती केन्द्र बन्दै बिपी धरान, इन्जिनियरलाई हटाइ विभाग प्रमुखको जिम्मा ओभरसियरलाई
प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्विन १०, २०७७ समय: २२:५९:५७
सुनसरी / धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आफु निकटकालाई उपकुलपति प्राडा ज्ञानेन्द्र गिरीले धमाधम नियुक्ति गर्न थालेका छन् । उनका सहयोगि दिलिप भट्टराई मार्फत डा. गिरी आइसोलेसनमा भएको बेला मालदार विभागमा आफु निकटकालाई ल्याउने र कमिसन तथा सेटिङमा असहयोग गर्नेलाई अन्यत्र सार्ने कामलाई तिब्र बनाएका छन् । पछिल्लो समय शुक्रबार प्रतिष्ठानको सिभिल इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख इन्जिनियर मदन कुमार साहलाई हटाएर ओभरसियर स्तरका विकास बस्याललाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ ।
६ बर्ष अघि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रतिष्ठान छिरेका साहले प्रतिष्ठानमा बनेका नयाँ भवनको डिजाइन उनकै हो । उनलाई एक्कासी शुक्रबार क्वाटरमै विभागीय प्रमुखबाट हटाइएको पत्र थमाइएको थियो । इन्जिनीयरिङमा मास्टर गरेका साह भन्दा जुनियरलाई प्रमुख बनाए पछि आफु असन्तुष्ट बनेको बताए । ‘आफुलाई कुनै जानकारी विना हटाइएको छ । त्यो पनि जुनियरलाई प्रमुख बनाइएको छ ।’–उनले भने–‘प्रतिष्ठानमा विगतको जस्तै फोहोरी खेल शुरु भएको छ । अदालत जानुको विकल्प छैन् ।’ यस अघि खरिद शाखाका प्रमुख विष्णु चापागाईलाई हटाइएको थियो । सेटिङका सामान खरिद प्रक्रियामा ल्याउन दवाव दिएका कारण उनलाई हटाइएको बताइएको छ । यस्तै विना जानकारी कुनै पदाधिकारीहरुसँग नसोधि मेट्रोन उपेन्द्र यादवलाई हटाइएको थियो । खरिदमा अशोक साह र मेट्रोनमा गायत्री राई नियुक्ति गरिएको छ । उपकुलपति गिरीका सहयोगि भट्टराईले विगतदेखि प्रतिष्ठानलाई दुहुनो गाई बनाउदैं आएका व्यापारीको सेटिङमा कर्मचारी हेरफेरको राजनीति शुरु गरिएको प्रतिष्ठानका एक कर्मचारी बताउछन् । कर्मचारी सरुवाबारे प्रतिष्ठानका रजिष्टार, अस्पताल निर्देशक कसैलाई जानकारी छैन् । सरुवाबारे कुनै जानकारी नभएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटाले बताए । मिडियामा आए पछि आफुलाई थाहा भएको उनको भनाई छ ।
प्रतिष्ठानले हाल किन्न लागेको सिटी स्क्यान फुल अप्सनको २५६ स्लाइडको हो । यसको मूल्य २५ करोड अनुमान गरिएको छ । यस अघि प्रतिष्ठानमा १६ स्लाइडको रहेको थियो त्यो पनि विग्रिएर थन्किएको छ । फुल अप्सनको उक्त मेसिन ल्याए १५ बर्षसम्म ढुक्क हुने बताइएको छ । तर कम्पनिले सेटिङमा न्यून स्तरको मेसिन दिन लागेको श्रोतले बताएको छ । यस विषयमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा ज्ञानेन्द्र गिरीसँग बुझन खोज्दा फोन उठाएनन् । प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटाले यस विषयमा आफुलाई कुनै सूचना नआएको जानकारी दिए ।